တရုတ်ရေအခမဲ့လက် gel, Antibacterial gel၊ Antibacterial hand gel ထုတ်လုပ်သူနှင့်ပေးသွင်းသူ
Home > ထုတ်ကုန်များ > ရေအခမဲ့လက်ဂျယ်
ရေအခမဲ့လက်ဂျယ် ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, ရေအခမဲ့လက်ဂျယ်လ်, ပibိဇီဝဆေးဂျယ်လ် ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, ပibိဇီဝဆေးလက်ဂျယ်လ် R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
CE MSDS 300Ml ဆေးရုံလက်ဘက်တီးရီးယားကာကွယ်ဆေး  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Pocket 60ml လက်သန့်ရှင်းသောရေမဲ့သန့်စင်ဆေးရည်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ကုန်ပစ္စည်းရှိသည် 500ML Satinizer Gel Hand Cleaner ကိုရောင်းချပါ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
စက်ရုံလက်သန့်ရှင်းစက် 60ML 100ML 250ML 300ML 500ML  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အဖြူရောင်ပုလင်း 500Ml Guard လက်ငင်းလက်သန့်ရှင်းဆေး  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Mini 100Ml စက်ရုံသည်လက်သန့်ရှင်းဆေးရောင်းသည်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
CE MSDS 250ML ဂျယ်လက်သန့်ရှင်းစက်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
500Ml ဆေးရုံအဆင့်ပAntိဇီဝဆေးလက်သန့်ရှင်းရေးဆေး  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
60ml Antibacterial Hand Gel စိတ်ကြိုက်လိုဂိုလက်သန့်ရှင်းဆေး  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Alcohol Quick Drying Gel လက်သန့်ရှင်းဆေး  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Bulk Waterless ရှားပါးပိုးမွှားလက် Gel လက်သန့်ရှင်းရေး  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အရက်လက်သန့်ရှင်းရေးနှင့်အတူ 300ML ပibိဇီဝဆေး  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
250ML လက်ကားပိုးသတ်ဆေးဂျယ်လ်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
လက်ဖြင့်ပွတ်သပ်အရက်ကင်းမဲ့သည့်အရက် 500ml  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
OEM စက်ရုံ 300ML လက်ပွတ်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Hand Rub 60ML Alcohol Antibacterial Gel ဖြစ်သည်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အကြီးမားဆုံး 3oz 100ml Alcohol ရေသန့်သန့်စင်ဆေးရည်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
500ml ကုန်ပစ္စည်းရှိသည်။ Alcohol Hand Rub  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Stock Antibacterial 500ML လက်ဂျယ်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
500Ml လက်သန့်ရှင်းဆေးပိုးသတ်ဆေး Lemon လက်ဆေးခြင်းအရည်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Aloe Fragrance 500Ml ရေမှုတ်ဆေးအရက်ပါဝင်ပစ္စည်းလက်သန့်ရှင်းဆေး  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
CE MSDS 300Ml ဆေးရုံလက်ဘက်တီးရီးယားကာကွယ်ဆေး
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 1.2 / Piece/Pieces
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 0.4 / Piece/Pieces
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 1.5 / Piece/Pieces
စက်ရုံလက်သန့်ရှင်းစက် 60ML 100ML 250ML 300ML 500ML
CE MSDS 250ML ဂျယ်လက်သန့်ရှင်းစက်
ထုပ်ပိုး: 250ml ပုလင်း
60ml Antibacterial Hand Gel စိတ်ကြိုက်လိုဂိုလက်သန့်ရှင်းဆေး
ထုပ်ပိုး: 60ml Bootle
Alcohol Quick Drying Gel လက်သန့်ရှင်းဆေး
OEM စက်ရုံ 300ML လက်ပွတ်
Hand Rub 60ML Alcohol Antibacterial Gel ဖြစ်သည်
500ml ကုန်ပစ္စည်းရှိသည်။ Alcohol Hand Rub
Stock Antibacterial 500ML လက်ဂျယ်
တရုတ်နိုင်ငံ ရေအခမဲ့လက်ဂျယ် ပေးသွင်း
၁။ သက်ဆိုင်သည့်နေရာများ - ဆေးရုံများ၊ ဘဏ်များ၊ စူပါမားကက်များ၊ ယူနစ်များ၊ ရုပ်ရှင်ရုံများ၊ ဖျော်ဖြေရေးနေရာများ၊ ကျောင်းများ၊ မိသားစုများ၊ ဟိုတယ်များ၊ စားသောက်ဆိုင်များ၊
၂။ ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ - ပြင်ပမှသာအသုံးပြုရန်၊ ကလေးများနှင့်ဝေးဝေးရှောင်ပါ။ မျက်လုံးချင်းမဆုံပါနှင့်။ မျက်စိထိမိလျှင်ရေများများဖြင့်ဆေးကြောပါ။ မီးလောင်လွယ်သော၊ လောင်ကျွမ်းနိုင်သောနေရာများမှဝေးဝေးရှောင်ပါ။ သင်မကျန်းမာပါကဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ပါ။
၃။ ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်အချက်အလက်များ - 250ml 450ml 650ml
4. အသုံးပြုမှု: လက်၏လက်ဖဝါးသို့သင့်လျော်သောထုတ်ကုန်ပမာဏကို အသုံးချ၍ လက်ဆေးခြင်းမရှိဘဲခြောက်သွေ့သည်အထိလက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ပွတ်ပေးပါ။
5. အခမဲ့ဆေးကြောသန့်စင်ဆေးဆေးကို ၇၅ အရက်ဟုခေါ်သည်။ ၎င်းသည်ပacterိဇီဝဆေးများကိုလျင်မြန်စွာဆေးကြောနိုင်သည်။ ခြောက်သွေ့သောလတ်ဆတ်သောခြောက်သွေ့ခြင်းမရှိဘဲခြောက်သွေ့။ လက်များကို ၁၀ စက္ကန့်ပွတ်တိုက်ပြီးနောက်ချက်ချင်းအငွေ့ပြန်နိုင်သည်။
၆။ ညစာစားပွဲမတိုင်မီနှင့်အပြီးကားမောင်းခြင်း၊ အလုပ်ဖျော်ဖြေခြင်း၊ လက်သန့်ရှင်းရေးသည်သင်၏ဘဝနှင့်ကျန်းမာရေးအတွက်အာမခံချက်ဖြစ်သည်။
ရေအခမဲ့လက်ဂျယ်လ် ပibိဇီဝဆေးဂျယ်လ် ပibိဇီဝဆေးလက်ဂျယ်လ် လက်သန့်ရှင်းရေး ရေအခမဲ့လက်ဂျယ်